Nezvedu - MRS chengetedzo technology Co., Ltd.
Simbi Lockout Hps
Dunhu Breaker Lockouts
Zviduku Dunhu Breaker Lockouts
Magetsi & Pneumatic Lockouts
Push Button & Chinja Lockouts
MRS chengetedzo tekinoroji Co., Ltd. inyanzvi inogadzira inogadzira mhando dzese dzeROD / TO zvigadzirwa. Isu takavakirwa mukugadzirwa kwezvakakodzera kukiya tagout zvigadzirwa kubatsira kunzvenga tsaona dzemumaindasitiri, izvo zvinokonzereswa nemasimba asingatarisirwe kana kutanga kwemachina nemidziyo nekusunungurwa kusingadzorwe kwesimba. Mumakore akati wandei ekukurumidza kukura, MRS yakave imwe yeanotungamira kugadzira muLoutout / Tagout zvishandiso muChina.
Kambani yedu yatotanga kugamuchira tsika zvinodiwa kubva kune vatengi
Isu tinopa huwandu hwakawanda hwekuvhara michina uye ma tagout anovhara mashandisirwo emagetsi uye emagetsi, kusanganisira chengetedzo, kukiyiwa kwevhavha, kukiya hasp, kuvhara magetsi, tambo yekuvhara, kititi yekukiya uye chiteshi, nezvimwe.
Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa maererano neEC, OSHA, CA Prop65 standard. Kusangana nezvinodiwa mumusika, kambani yedu yatotanga kugamuchira tsika zvinodiwa kubva kune vatengi. Imwe yehukuru hwekusarudza zvigadzirwa zvedu ndeye yepamusoro-yekutengesa masevhisi.
Mwedzi gumi nembiri yewarandi nguva inovimbiswa kuti iwe ugare uine chokwadi chekutenga zvigadzirwa zvedu. Isu zvakare tine yedu yekutsvagisa uye yekusimudzira timu zvakare kuburitsa akasiyana marudzi ekuchengetedza Lockout zvigadzirwa uye mhinduro kusangana edu akazvitsaurira vatengi 'zvido.
MRS - "Kuvharira hupenyu hwako, tagout kuchengeteka kwako".
Kuchengetedza kwekuchengetedza ivimbiso yebasa rine hutano uye hupenyu hune hutano kune vashandi. Kune emabhizinesi, hwaro hwekuwana zvakanakira hupfumi nekusimudzira kwakasimba. Pasi pekuvandudzwa kwekukurumidza kwemaindasitiri emamiriyoni, zviuru zvengozi dzebasa zvinokonzerwa nekusimbisa simba kana kusatarisika kwemachina nemidziyo, nekudaro zvakakosha kuita chirongwa chakazara cheLockout Tagout kudzivirira tsaona mumaindasitiri.
OSHA yakajairwa, yakaburitswa neOpupational Kudzivirirwa uye Hutano Hutongi, inoonekwa semumiriri uye ane masimba kuchengetedzeka pabasa mureza. OSHA standard ine zvakapfuma zvemukati zvekuchengetedza uye hutano tsika, yakasimba chengetedzo manejimendi manejimendi uye sainzi chengetedzo manejimendi masystem, ayo anozivikanwa zvakanyanya uye anoyemurwa kutenderera pasirese.
Pamwe pamwe nekuvandudzwa kwenguva uye kukura kwezvinodiwa mumusika, kwete chete vanhu vanofanirwa kusimudzira kwavo kwekuziva, asi kuvimbiswa kwekuchengetedza pane Hardware kwakakoshawo. Nekudaro, MRS yakabuda panguva chaiyo.
MRS chengetedzo tekinoroji Co., Ltd.iyo yemazuva ano bhizinesi kubatanidza R&D, kugadzira uye sevhisi. Isu tine chekutanga-kirasi manejimendi timu uye dzinoverengeka dzakazvimirira dzehungwaru dzimba dzekodzero. Nemaonero ehunyanzvi, akangwarira mafungire uye data resainzi, MRS inopa chengetedzo mhinduro kune vatengi mukugadzira michina, chikafu, kuvaka, zvigadzirwa, makemikari indasitiri, simba nemamwe minda. Isu tinofukidza huwandu hwakawanda hwekuchengetedza makiyi anosanganisira chengetedzo yekuvhara, vharuvha yekuvhara, kukiya hasp, magetsi ekuvhara, tambo yekuvhara, boka rekuvhara bhokisi, kitsi yekuvhara uye chiteshi uye zvichingodaro. Zvigadzirwa zvedu zvakatengeswa mhiri kwemakungwa uye zvakazara kuzivikanwa nemusika wepasi rose.
MRS vanogara vachitevedzera kune huzivi hwekuti simba rega rega rine njodzi rinofanira kuvharwa. Isu tinosimudzira "Kutarisana nevanhu, kuchengetedzeka kutanga". Mumwe nemumwe wedu anofanira kusimudzira ruzivo rwekuchengetedza. "Kuvharira hupenyu hwako, tagout kuchengeteka kwako" ndiyo slogan yedu yekutsigira pfungwa yekuchengetedza. Kuchengetedza hupenyu hwevashandi vese pasirese nehunhu hweChinese ndiko kutsvaga kwedu kusingazungunuke.
Kutsvaga kwedu kutsva hakuna kumbomira uye kuri kufamba nekukurumidza munzira.
Sezvo isu tese tichiziva, hunyanzvi mweya wekupona kwebhizimusi nekusimudzira. Kugadziridza hakungosanganisiri chigadzirwa chigadzirwa, hunyanzvi hwetekinoroji uye hunyanzvi hwekuvandudza, asi ideological kuvandudza kwekambani Nzanga yanhasi iri kuramba ichienda kumberi nguva dzese. Nekuda kweizvozvo, makambani anofanirwa kugadzira uye anofanirwa kugadzira, zvikasadaro anozobviswa neThe Times.
Nekuda kwekusimudzira kwekambani, MRS haina kumbobvira yamisa zvigadzirwa zvitsva zvinokudziridzwa neyedu pachedu yekutsvagisa nekusimudzira timu. Nemazhinji mapateni matsva dhizaini, MRS yakava kambani yekugadzira. Institutional hunyanzvi hwekambani yedu hwave kuvandudza. Misangano nehurukuro zvakakurudzira kuberekwa kwehurongwa hutsva uye nekuvandudzwa kwesangano rekare. Pamusoro peaya maviri, ideological hunyanzvi, muchokwadi, ndiyo musimboti wetsika yekambani. Nechinangwa chekubvisa iyo stale uye nekuunza iyo nyowani, MRS inoramba ichisimudzira dzidziso dzedu zvinoenderana nedambudziko rinoshanda.
Kugadzira, MRS iri munzira.
© Copyright -2021 - 2023 Rutsigiro rwehunyanzvi: